एशिया प्यासिफिक सम्मेलन : तथ्य र प्रमाणले भन्छ- उद्देश्य धर्म प्रचार नै (भिडियाेसहित) « News24 : Premium News Channel
एशिया प्यासिफिक सम्मेलन : तथ्य र प्रमाणले भन्छ- उद्देश्य धर्म प्रचार नै (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । एसिया प्यासिफिक सम्मेलन व्यापक विवादमा फसेको छ । तर पनि सरकारले अझै आफ्नो बचाउ गर्नं भने छोडेको छैन । विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भए पनि उसले सम्मेलनलाई कुनै एक आईएनजीको आर्यक्रम भनेर पन्छिरहेको छ । बरु ध्यान व्यस्थापन र सुरक्षामा भएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
सरकारले एसिया प्यासफिक सम्मेलनमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए पनि यससँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यहरु छन्, जसले सम्मेलनकाे गुप्त उद्देश्यबारे बुझ्न सजिलाे हुन्छ-
तथ्य नं १
सरकार सहआयोजक होइन भन्छ प्रमाण हो भन्छ । सरकारले सहआयोजक होइन भने पनि यूनिर्भसल पीस फेडरेसनको आधारिक वेब साइटमा भने सहआयोजक नै छ । यो शुरुमा राखिएको अफिसियल स्टेटमेन्ट सहआयोजक लेखिएको थियो । जुन पछि हटाइयो । यो हामीसँग सुरक्षित नै छ ।
तथ्य नं २
यो निमन्त्रणा पत्रमा नेपाल सररकार र संसदको लोगो छ । यसमा आईक्यापको पनि लोगो छ । यसैमा फेरी यो दुई वटा लोगो छ । एउटा यूनिभर्सल पीस फेडेरेसन र यससँग सम्बन्धित अर्को संस्था इन्टरनेशनल एसोसियसन अफ पार्लामेन्टिरियन्स फर पीस हो । यी दुवै एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् । सरकारले भने जस्तै आइक्याप यसको आयोजक हो भने नेपाल सरकारकै लाेगाे र अन्य यी सबको नाम यहाँ किन राखियो ?
तथ्य नं ३
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा भन्छन्- सम्मेलनको नेपाल सहआयोजक हैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका सह प्रवक्ता भन्छन्- लाेगो प्रयोगबारे हामीलाई थाहा छैन । उसाे भए लाेगाे किन र कसरी प्रयाेग भयाे ? दरुपयाेग भने कारबाही हुनुपर्याे नत्र सरकारकाे नियत नै खराब छ भन्ने बुझिन्छ ।
तथ्य नं ४
आइक्याप आयोजक भनिए पनि उसको वेबसाइटमा कतै पनि यो समिटका बारेमा जानकारी छैन । उसको अफिसियल वेबसाइटले कतै पनि यो नेपालमा हुँदैछ भनेर भनेको छैन । आइक्यापको अक्टोबर २४ देखि २७ मस्कोमा आयोजना भएको स्टाण्डिङ कमिटीको बैठकमा समेत छलफल भएको कतै देखिएको छैन ।
तथ्य नं ५
सरकारले एसिया प्यासफिक समिटका समयमा सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनमा मात्र चासो राखेको बताएको छ । तर यूनिर्भसल पीस फेडरेसनको ववसाईटमा भने अक्टोबर २८ मा सम्पन्न भएको मेयरहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले नै व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित हुन भनेका छन् भनिएको छ ।
तथ्य नं ६
अब यो हेर्नुहोस्- समिटको तालिका । डिसेम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली र उनकी पत्नी, नेपालभरिका मेयर दम्पती लगायतलाई आशीर्वाद दिने कार्यक्रम छ । र यो कार्यक्रम एकीकृत चर्च सदस्यहरुको एकताको लागि महत्वपूर्ण छ ।
तथ्य नं ७
अब कुरा आउँछ आशीर्वाद कसले दिने ? आशीर्वाद दिन नेपाल आएकी छन्- क्रिस्चियनका धर्म गुरु, अाफूलार्इ येसुकी नयाँ छोरी भनेर दाबी गरिरहेकी हाक जा हान मुन । उनले यसभन्दा अगाडिका विभिन्न कार्यक्रममा समेत आफू नै अबको मसिहा हो भन्दै आएकी छिन् ।
तथ्य नं ८
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यस कार्यक्रमको अामन्त्रण समितिका अध्यक्षका रुपमा छन् । कार्यक्रम आयोजनाका बारेमा आयोजित सम्मेलनमा समेत यो कार्यक्रम धर्म प्रचारको लागि होइन भने । तर यो भनाई हामीले प्रस्तुत गरेको तथ्यसँग मिल्दैन ।
तथ्य नं ९
यो यो तस्बीर हेर्नुहोस् । यहाँ जोसे दि भेनिसिया छन् । उनी आईक्यापका संस्थापक तथा वर्तमान अध्यक्ष हुन् । उनी आफुलाई येसुको छोरी हु भन्ने हाक जा हान मुनको पछाडि छन् । र मुनि लेखिएको एकीकृत चर्च सर्कलभित्रका भनेर । यसले पनि जनाउँछ यी संस्था बीचको सम्बन्ध र उद्देश्य ।